Ny paompy fandroana tsara indrindra: faucet vita amin'ny famolavolana hanina hamenoana ny fomban'ny fandroanao
Home / Interior design / Ny faucet amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mahomby indrindra: paompy hanatsarana ny karazana efitrano fandraisam-bahininao
2020 / 09 / 28 FisokajianaInterior design 4590 0
Amin'ny fisafidianana iray amin'ireo faucet amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tsara indrindra, na manana efitrano fialan-tsasatra vao haingana na mahazatra ianao, dia misy fanapahan-kevitra faucet betsaka kokoa noho ny faucet chrome tsotra fotsiny, ary izao ianao dia afaka mahita isan-karazany ny tahiry mahasalama ary loko izay afaka mampiavaka ny efitrano fitsahanao.
Inona no eritreretina rehefa miantsena faucet amin'ny efitrano fialan-tsasatra
Rehefa mandinika izay faucet ao amin'ny efitrano fialan-tsasatra no tsara indrindra ho anao, tsy ny karazana ihany no ilaina, na eo aza ny fampiharana. Raha sendra manavao tanteraka ny efitranonao ianao ianao na mamorona efitrano fandraisam-bahiny dia afaka manomboka ianao avy eo ary mifantina na inona na inona karazana faucet tadiavinao, na izany aza raha manova ny faucet anao fotsiny ianao apetaho ilay toerana, ny fomba tsotra indrindra hanaovana izany dia ny fisafidianana ny karazany namboarina ho toy ny paompy ankehitriny.
Ny faucet napetraka afovoany angamba no mahazatra indrindra. Izy io dia manana singa afovoany misy faucet roa hitantanana rano mangatsiaka sy mafana. Ny faucet misy lavaka tokana dia singa tokana ary miatrika izay mifehy ny rano mangatsiaka sy mafana avy amin'ny fantsona. Farany, ny faucet mitaingina rindrina dia satria apetraky ny famantarana dia apetraka ao anaty rindrina. Ireo dia matetika misy ao amin'ny fandroana na kovetabe fantsom-boalavo midadasika kokoa noho ny filentehana mahazatra, vokatr'izany dia manana fironana ny hampitombo ny spout arching.
Na inona na inona karazana noeritreretinao, zahao ny spherical-tsika etsy ambany mba hahitanao izay mety ho iray amin'ireo mety indrindra amin'ny efitranonao. Nisafidy karazan-karazany miely izahay, nanangana karazana ary vita mba hanomezana hevitra momba ny efitrano fandraisam-bahiny betsaka ho hitanao.
1. Faucet Toilet mitaingina fonenana Ferode Wall
Faucet nitaingina rindrina vao tsy ela akory izay
Adin-drano: Bar 0.75 / 5.5
+ Tsotra mifanaraka aminy + Fifandraisana iray amin'ny fitantanana
Antony hialana amin'ny
- Tsy tokony ho azo ahitsy ny tampon'ny fivoahana
Ity faucet efitrano fitsangantsanganana napetaka amin'ny rindrina ity dia misafidy fitantanana iray amin'ny rano mangatsiaka sy mafana tsirairay ary fantsona marindrano tokana ho an'ny rano izay mikoriana avy hatrany midina. Ny faucet toy izany dia mety mifanaraka tsara amin'ny koveta na koveta lehibe kokoa satria tsy azo ovaina ny tampon'ny fivoahana. Izy io dia endrika kely indrindra miaraka amin'ny faran'ny chrome be pitsiny sy ny boribory boribory izay tian'ny sasany amin'ireo valiha maoderina, ary ny fantson-drambo rambony marobe dia natao hametrahana haingana sy mivantana. Raha sendra manandrana manamboatra fanovana voadio ao amin'ny efitranonao ianao, ity faucet mitaingina rindrina ity dia mety ho ilay asa tadiavinao.
2. Fantsom-baravarankely mixer John Lewis Marden Basin Mixer
Faucet napetraka eo afovoany misy hazavana mamirapiratra
Tsara indrindra ho an'ny: Karazana mahazatra
Adin-drano: Bar 0.10 / 5
+ Faucets karazana Zeorziana + Fantsona azo ovaina
- Sarotra ny mifanaraka
Raha sendra mihoatra ny mpankafy bogaly mahazatra ianao fa tsy ny fitaingoana fanao maoderina minimalist, dia ireo faucets ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny Zeorziana ireo no mety ho ilay efitrano fitahirizanao rehetra. Izy io dia faucet napetraka afovoany misy faucet kely sy chicet roa izay ahafahanao mitantana ny sery mangatsiaka sy mafana mikoriana tsirairay. Ny Chrome dia nohosorana ary nofenoina tànana fotsy sy tondro izay mamaivay ary mangatsiaka. Ny faucet dia manana andohalambo kely misy spout anti-splash ary ny safidy curvaceous dia manampy fotsiny amin'ny famosaviana estetika ity faucet efitrano fitsaharana ity. Antony iray manamarika ny fahitan'ny vinavinan-javaboary ny torolàlana very kely fotsiny ho an'ireo faucets ireo, noho izany dia mety hitaky manam-pahaizana ianao hametraka azy ireo, na fikirizana maromaro tsy latsaky ny!
3. Fifanarahana iray amin'i Moen Eva miaraka amin'ny Faucet Arc Toilet be loatra
Safidy hafa amin'ny chrome, ity faucet ao amin'ny efitrano fitsaharana ity dia afaka manampy olona amin'ny fandroanao
Tsara indrindra ho an'ny: Karazan-karazany
Tapitra: Soavaly nikosoka
lasa: Loaka tokana nitaingina
+ Farany hafa tanteraka + Faucet-arch
- Mitaky fanadiovana matetika
Ny fametahana ny kabine sy ny fittings dia tsy mila chrome indraindray, ary ity faucet nikela borosy ity no ohatra mety. Faucet misy lavaka tokana misy tsiranoka avo lenta; famolavolana izay mety miasa tsara amin'ny kovetabe fandroana na koveta tototry. Nilaza ny mpanjifa fa rivotra mafana apetraka ity faucet efitrano fitsaharana ity ary mora ny fifampiraharahana amin'ny fifindran-toerana manomboka amin'ny mangatsiaka mankany amin'ny mangatsiaka rehefa tadiavina. Naneho ny heviny ny mpanjifa fa vokatry ny loko sy ny faran'ny faucet dia mitahiry tsotra fotsiny ny dian-tanan'izy ireo, izay mety ho mpanapaka fifanarahana ho an'ireo olona mankahala ny fanadiovana ny kabine. Ny sasany nitazona savoka hamenoana ireo faucet ireo dia mety hitazona ny endrik'izy ireo ho lava kokoa.
Faucet napetraka afovoany misy miolakolaka sy tohana mora
Tsara indrindra ho an'ny: Fandaharana ambany adin-tsaina
+ China no mitantana + Andohalambo tafahoatra
- Ny fihenjanana kely fotsiny
Rehefa manana adin-drano ambany ianao ao amin'ny efitranonao, dia ho anao ity faucet ity. Ny faucet napetraka afovoany dia natao mba handraisana fandaharam-pehin-tsindry ambany ary tiany ihany koa izy noho ny famolavolana Victoria kanto. Ny faucet arching be loatra, ny kitapon'i Shina ary ny sisiny mora, voalamina dia safidy voafantina isaky ny ravina maoderina sy mahazatra, koa raha sanatria ka manova ny karazan-dohanao ianao, mety ho hitanao fa ity faucet ity dia asa tsy maharitra. izay afaka mifangaro miaraka amin'ireo atitany misy anao.
Fantsona voalohany nefa azo ianteherana ho an'ny lovia kely fidiovana
Tsara indrindra ho an'ny: Siny kely
Adin-drano: Bar 0.2 / 5.0
+ Ny spout haingana dia midika fa tsy misy splashes + Fihenjanana rano isan-karazany
- Miseho voalohany
Rehefa manana efitrano fialan-tsasatra kely amin'ny joro ianao, ity faucet chrome kely ity dia mety ho fifantina azo atao amin'ny fametrahana azy ihany koa. Sehatra tokana misy lavaka iray misy fihenjanana rano isan-karazany sy tsiranoka fohy izay mampiato ny famafazana amin'ny vilia kely kokoa. Tsy afaka manana safidy estetika manokana io, na izany aza, ny farany voadio dia mameno ny endrika mandanjalanja sy lamaody ary fifantina misy vidiny mirindra raha toa ka zavatra iray fotsiny azo itokisana ao amin'ny efitrano fitsaharan'ny mpitsidika, ohatra.
6. Fitaovana fanadiovana trano fidiovana Delta Lahara
Faucet avo izay manome endrika malefaka sy mihetsika tsy misy rano
Tsara indrindra ho an'ny: Class
Adin-drano: Avo sy ambany
Tapitra: Varahina Chrome / Champagne
+ Alternative ny vita + Mihetsika mora ny rano
- Somary mitabataba fotsiny
Ny Delta Lahara Faucet dia misy amina famaranana telo samy hafa tanteraka izay mifanaraka amin'ny karazana anatiny samy hafa tanteraka, ka mahatonga ity faucet ity ho voafantina isaky ny toetran-dehilahy sy mahazatra. Ny spout arching be loatra dia midika fihetsika tsy misy rano izay mamela ny fandroana ho feno mora, ary tahony roa hitantanana ny hafanan'ny rano. Nilaza ny mpanjifa fa mandray fivoriana kely fotsiny izy ireo saingy azo antoka fa vidiny ho an'ny fijery efa vita io, mirona hitabataba kely fotsiny izy ireo rehefa miasa amin'ny hatsiaka rehefa ela ny ela, izay tsy olana loatra amin'izany. apetranao ao anaty sobika mifanohitra amin'ny fandroana izy ireo.
7. Fitaovana fandroana mahazatra an'ny Bristan
Faucet hatsiaka sy mafana mahazatra ho an'ny fandroana sy koveta
Tsara indrindra ho an'ny: Fividianana vola
Adin-drano: 0.2 / 0.8
+ Vidiny mirindra + Famolavolana vaovao
- Tsy ny fanciest
Angamba marary ianao amin'ny faucet mitete ao amin'ny efitrano fandraisanao ambany, raha tsy izany dia mila mahita vahaolana haingana ianao hanoloana efitrano fandraisam-bahiny taloha. Raha izany no izy, ireo faucets vita amin'ny fandroana mahazatra ireo dia miankina ihany amin'ny voalohany. Ny tanany dia voamarika mazava amin'ny hatsiaka sy mafana ary ny chrome dia nohosorana mba ho faran'ny fahendrena. Ny faucet dia manana andohalambo ambany misy tsiranoka fohy izay midika fa matetika izy ireo dia mety amin'ny fandrefesana sy ny hakanton'ny tavy miaraka amin'ny fandrahonana hikorontana. Mety ampoizinao ny fihenjanana amin'ny rano samihafa ary tsy misy famoahana amin'ity faucet ao amin'ny efitrano fitsaharana ity.
Ahoana no manapa-kevitra amin'ny iray amin'ireo faucet efitrano fitsaharana tsara indrindra 2020
Ny rafitry ny rano mandoro anao
Alohan'ny hitahirizanao faucets koveta sy koveta, ataovy izay hahazoana antoka fa karazana rafitra mandoro rano inona no azonao ao an-tranonao. Ny fandaharana misakafo amin'ny hery misintona dia mampihena ny adin-tsaina, ary ilaina ny misafidy faucets mety
Karazana fantsona fantsona
Raha manana ny banga faucet iray ny fantsakana havaozinao na ilay marika vaovao apetrakao dia safidio ny faucet monobloc sy lever tokana.
Ny faucet Monobloc dia misy spout iray, na izany aza misy tahony roa ahafahana manitsy ny fihetsiky ny rano mangatsiaka sy mafana. Ny fantsom-bitsika tokana dia ahitsy amin'ny lever, ary amin'ny alàlan'ny famadihana azy io ho teknika na iray hafa dia azo tantanana ny rano mangatsiaka sy mafana.
Raha sendra nanambola tao anaty tavy iray misy lavaka faucet roa ianao, dia mitady faucets andry. Manome rano mangatsiaka sy mafana tsy miankina ireo. Ny tahon'ny faucets andry dia azo ampiasaina amin'ny lever, na manana knobs na tahony miendrika hazo fijaliana.
Andramo ny spout faucet basin izay eritreretinao. Tsy maintsy mizaka be dia be eo ambonin'ny lovia izy io, noho izany dia milamina ny fanasana ny felatananao ambanin'ny faucet.
Hevero ihany koa ny momba ny fanirianao spout mihidy na faucet amin'ny riandrano. Ity farany dia misokatra amin'ny prime, mampiharihary ny rano mikoriana eo akaikin'ny fantson'ny spout ary mety hanao efitrano spa karazana fanampiny.
Fomba fampiasa amin'ny fantsona fandroana
Toy ny amin'ny lovia fandraisam-bahiny, ny lavaka fantsom-panafody ao anaty fantsona izay havaozinao na ny endrika vaovao nofidinao no hanapa-kevitra hoe iza avy ireo paozy fantsona malalaka ho anao.
Faucets Monobloc misy spout iray na izany aza, kitapo roa, ary faucets lever tokana misy spout iray ary iray lever miasa miaraka amin'ny fandroana misy banga faucet iray.
Ny fantsom-pako, izay manome rano mangatsiaka sy mafana tsirairay, ary ny fantsom-panafangaro dia omena fandroana misy lavaka faucet roa. Ny fantsom-panafangaro dia mamela ny fanitsiana tsy mitongilana ny rano mangatsiaka sy mafana, na izany aza, ny mikoriana roa dia atambatra ao anaty tsiranoka iray eo ambonin'ny fandroana.
Ny fantsom-bozaka fangaro dia mety manana fantsom-pandroana mifampitohitohy, ary mety avily lalana ilay rano raha ilaina izany.
Fitaovana famafazana basin sy fandroana, faucet mitaingina rindrina, ary faucet tsy miankina
Tsy ny paompy rehetra no apetraka eo amin'ny lovia na koveta, amin'ny tranga hafa antsoina hoe deck-mount.
Ny faucet napetaka amin'ny rindrina dia natao hihoatra ny fandroana na koveta, miaraka amin'ny lovia fantsakana. Ny tombony? Mamela ny famolavolana koveta sy koveta miaraka amin'ny sisiny manify izy, miampy ny fametrahana ny faucets ambonin'ilay tavy na koveta nofenoin'izy ireo toa madio. Ny faucet napetraka amin'ny rindrina dia tokony hanadio haingana kokoa ny efitrano fialan-tsasatra vokatry ny faran'ny faran'ny fantsona izay tsy mora tohanan'ny fananganana limesialy.
Raiso ny haben'ny spout sy ny tampony amin'ny fandaharana rehetra. Ny basin-countertop dia azo apetraka amin'ny elanelana kely amin'ny rindrina ihany koa ary ny faucet izay tsy mizaha toetra dia lasa lavitra manaparitaka ny latabatra.
Ny fantsom-pandehanana freestanding - na misy gorodona dia apetraka eo akaikin'ny fantsom-panafody malalaka. Satria tsy mizaha tavan'olona amin'ny fandroana fandroana izy ireo dia mbola lehibe kokoa ny fisian'izy ireo ao anaty efitrano, toy izany koa matetika ny fomba fananganana ny efitranonao vaovao.
Toy ny fitsipika mahazatra, ny fantsom-bitsika sy ny tavy tsirairay dia mety hosarahana ho endrika maoderina sy mahazatra.
Ny fantsom-pako sy ny fantsom-boalavo mahazatra dia mety misy tahony hazo fijaliana na lever ary misy singa saro-takarina. Izy ireo dia hameno ny fananana elanelam-potoana, ny teti-dratsy any amin'ny firenena ary ny fampitaovana ny trano fidiovana.
Marefo kokoa ny fantsom-batana sy ny fantsom-batana mandraka ankehitriny. Izy ireo dia mety ho curvaceous na extra angular, ary manana dian manify na be dia be, ary misy safidy maro be amin'ny manome.
Tapitra ny faucet
Chrome dia mety indrindra amin'ny fantsom-baravarankely sy fantsom-batana ary safidy amin'ny feo raha maniry hamorona famirapiratana ao amin'ny efitrano fialan-tsasatra ianao. Ireto misy safidy mifanohitra matetika matetika any:
Inôksa ny fantsom-batana sy ny tavy dia tsy mamirapiratra toy ny chrome, kanefa ho hita fa madio sy madio izy ireo. Mahitsy ny manasa sy mitondra sarotra, ka ho tsara mandritra ny taona vitsivitsy.
nikela Ny fantsom-batana sy ny fantsom-drano dia toa mazava ihany koa nefa miaraka amin'ny faran'ny hazavana ambony noho ny chrome.
Vita ny borosy dia azo atao fanampiny raha sanatria ka tsy mila famirapiratana feno ianao. Haniry ny ho madio kokoa noho ny chrome izy ireo.
Gold fantsona fandroana sy fantsakana mety efa lavo tsy sitrana nandritra ny fotoana elaela, na izany aza, dia izao izy ireo raha vao nieritreritra ny vidiny farany mieritreritra. Ny fanazavana? Ny volamena dia hikomy amin'ny fahatsiarovan-tena mafana kokoa noho ny metaly volafotsy ho antsasaky ny drafitra WC. Tsy misy volamena tokana tokana amin'ny fanomezana, na izany aza. Ho fanampin'ny volamena 'tsotra', izay toa manahirana be araka ny noeritreretinao azy, dia eritrereto ny momba ny volamena raozy, izay maodely miloko mavokely, na volamena vita amin'ny fomba fahagola, izay misy akony malefaka kokoa.
Varahina sy varahina ny faucet, toy ny volamena, dia afaka manampy feo metaly mafana kokoa amin'ny trano fidiovana, ary miseho voadio.
Black fantsona fandroana sy koveta no maoderina sy malama. Izy ireo dia hiasa eo anilan'ny fefy fandroana karazana vy, na mety hanampy amin'ny famatorana ny endrika trano miaraka amin'ny toerana fampiasan'ny accents mainty manerana ny trano fidiovana.
Misy faucet miloko hafa koa any. Voadio ny fotsy, na izany aza, azonao atao ny manolotra loko miloko amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amina faucet vita amin'ny tsy misy traikefa, mavokely, mavo na manga, ankoatry ny hafa.
Miakatra tampoka amin'ny tolotra tsara indrindra avy hatrany
Abode FERVOR Wall Mounted…
Moen 6400 Eva Fifanarahana iray…
Bristan NA BAS C Orta Basin…
Delta Toilet Faucet Low…
Previous :: Mpifanila vodirindrina tsara hanarenana, manitatra lakozia Next: Hevitra vitsivitsy hotandremana amin'ny fanaovana fampiroboroboana ny trano